Published : December 01, 2008 | Author : मालिकराम राई 'वियोगी'
Category : Story / कथा | Views : 1446 | Rating :
उसको आँखाभरि विद्रोहको भाव स्पष्ट देखिन्थ्यो । निराशाका लहर मुहारभरि फैलिन्दै थियो । पीडा र दर्दका आभाहरू ओँठभरि लर्बराउदै थिए । त्यसपछि उनीहरू छुटे । अझ दिलमान बोल्थ्यो होला तर ऊ घरबाट निक्लेको समय निकै भइसकेको थियो । अलि ढिलो भयो भने उसकी स्वास्नीले उखर्माउलो मचाउँथी । उनी साह्रै दुर्छी, छुच्ची, मुखाले थिईन् । एकाध घण्टा ऊ कतै भुलियो भने बबण्डर मच्याउथी । कति पटक त माधव हुँदाहुँदै उसले आफूलाई अदपमा राख्दा राख्दै उसको सातो खाएकी थिई । उसले यो निसन्देह भन्न सक्छ कि दुवैले माधवलाई सम्मान र आदर गर्थे । कारण के थियो त्यो त ऊ भन्न सक्दैन तर उसको उपस्थितिमा उनीहरू आफूलाई अदपमा राख्न हरप्रयास गर्थे । दिलमान साह्रै निरीह थियो । आफूलाई अदपमा राख्दा राख्दै त उसकी स्वास्नीले त्यति विधि उसको हुर्मत लिन्थी भने खुल्ला र आवेशमा कसो गर्दिहोली कसैले सोँच्नै सक्दैनथ्यो । उनको यो अव्यवहारिक र अस्वाभाविक प्रवृतिले माधवको अन्तरमन नराम्ररी प्रभावित भएको थिएछ । त्यसैले एक दिन उसले हठात भनिदियो,- "बहिनीको अनुहारजस्तै व्यवहार र शीलस्वभाव सुन्दर भइदिएको भए भाइले यो धर्तीमा केही खोज्नु पर्दैनथ्यो । काश ... ।" त्यसबेला दिलमानले निर्निमेष दृष्टिले उसलाई हेरिरह्यो मात्र, ऊ बोलेन । उसमा कुन भाव उब्जियो माधवले अनुमान लगाउन सकेन ।
एक दिन उनीहरूको विशेष समारोहमा पुनः भेट भयो । यसपाली दिलमान धेरै निराश, उदाश देखिन्थ्यो । उसको अनुहारभरि खुशीको थोरै पनि संकेत थिएन । अनुहारमा न रस देखिन्थ्यो न बोलीमा जोश । उर्जाहीन यन्त्रजस्तै मूल्यहीन देखिन्थ्यो ऊ । मलीन अनुहार पार्दै दिलमान बोल्यो,- "अब त दाइ मेरो कथा बन्छ होला नि "
कसरी ? के थपियो र त्यस्तो घटना ?" माधवले जिज्ञासापूर्वक सोध्यो ।
त्यस्तै भावमा दिलमान बोल्यो- "निर्दयी, निर्मोही स्वास्नी भनाउदिले मलाई छाडेर हिँडी ।" लगभग उसको स्वर खिइसकेको सुनिन्थ्यो । भन्दै गयो -"हेर्नु न दाइ, उसलाई बिहे गर्दा मलाई कम सास्ती परेको थिएन ! नेपाल गएर आमाबाबुबाट मीठो वचन लिई आएको थिएा तर यहाँ उसले ढिम्किन दिइन । म केमा ढुक्क थिएँ भने, हाम्रो संस्कार र परम्परामा आमाबाबुले वचन दिइसकेपछि त्यो अकाट्य हुन्छ । कथंकदाचित ! केटी कसैसँग गइहाली भने पनि फर्काउनु मिल्छ । अधिकार लाग्छ । हामी छोरामान्छेले पनि अर्को बिहे गर्न मिल्दैन । कतै त्यस्तो भइहाल्यो भने माफी माग्नुपर्छ, जरिवाना (नैतिकताको) तिर्नुपर्छ । त्यसैले वचन पाइसकेपछि हामी अनुकुल समयको प्रतीक्षामा बस्नुपर्छ । मैले पनि अनुकुल समय पर्खेर बस्नु पर्यो । किनभने केटीले मेरो परीक्षण गर्ने भई । एक वर्षे परीक्षण कालपछि मात्र उसले सहमति जनाई । अनि हाम्रो बिहे भयो ।"
"उनले कस्तो परीक्षण लिइन् ? के तिम्रो व्यवहार शंकास्पद थियो ? कि तिम्रो आनीवानी उनलाई थाहा थिएन ?"
"मेरो हाउभाउ र व्यवहार उसलाई अलि अनौठो र शंकास्पद लाग्यो रे । फेरि, त्यसबेला मेरा साथीहरू त्यस्तै थिए, लागुपदार्थ सेवन गर्ने । यी कारणले मेरो लामो परीक्षण लिनु परेको रे । वर्ष दिनको परीक्षण कालमा म सफल भएँ । हाम्रो बिहे भयो । हाम्रो जीवन सुखमय बित्यो । हाम्रो प्रेमको चिनो एउटा छोरो जन्म्यो । तर त्यो परीक्षण काल मैले काटेर पनि, हाम्रो छोरो भएर पनि आज ऊ हठात लापत्ता भई । उसका साथीहरू भन्छन् -"ऊ ब्रिटेन (युके) गएकी छे ।"
माधव उसको कुरो निश्चल, निशब्द सुनिरह्यो । केही छिनको मौनतापछि ऊ बोल्यो- "सायद, तिमीले बहिनीलाई कहिलेकाहीं सताएका थियौ होला ? जसले गर्दा उनले तिमीलाई दुई चार दिन तड्पाउनु चाहिन् । तर केही अपवादबाहेक धेरै छोरीमान्छे बच्चालाई सर्वस्व मान्छन् । त्यसैले छोरो सम्झेर पनि उनी आउने छिन् । तिमी ढुक्क बसे हुन्छ ।"
दिलमानले आफ्नो अडानबाट डेग नचली भन्दै गयो,- "मलाई त विश्वास लाग्दैन, उनी फर्केर आउछिन् भनेर ।" ऊ यसबेला साह्रै उदाश र निराश देखिन्थ्यो । उसको अनुहारमा कुनै जिज्ञासा, उत्साह, उमंग र विश्वास थिएन । त्यसैले मैले भनें,- "आमाबाबुको वचनलाई विश्वास गर्नेमान्छे तिमी, कसरी बच्चाको आमालाई विश्वास गर्दैनौं ? तिमीहरूको रीतिरीवाज र संस्कार सुनेर त मलाई ताजुप लाग्यो, आमाबाबुको वचन अकाट्य हुने तर बच्चाकी आमाचाहिँ .... ! बरु बच्चाकी आमा र बाबुलाई छोराछोरिसँगको सम्बन्ध अकाट्य हुनु पर्ने । आमाबाबुले दिने वचन त नारीहरूको स्वतन्त्रताको हनन हो । अविवाहित नारीले लोग्नेको चयन स्वतनत्ररुपमा गर्न सकोस् नकि आमाबाबुको वचन अकाट्यरुपमा मान्न परोस्। यस्तो विसंगतिलाई हामीजस्तो शिक्षित र सचेतवर्गले परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ । सामाजिक संस्कार र परम्पराले मानव हितलाई बेफाइदा गर्छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्दै लानु हाम्रो कर्तव्य हो । यस्तो चलनले भाइको जस्तै घरव्यवहार डाँवाडोल हुनसक्छ ।"
उसले भन्यो,- "खोइ दाइ ! हाम्रो संस्कार यस्तै छ । हामीले मान्नैपर्छ । शिक्षित अशिक्षित सबैले मानिरहेकै छन् । कसैकसैले परिवर्तनप्रति सोच्दै होलान् कि ... ।"
दिलमानको अवस्था साह्रै नाजुक थियो । मधुरो मलिन अनुहार सडिसकेकोजस्तो देखिन्थ्यो । विक्षिप्त र उदास शरीर लिएर ऊ निकैबेर बर्बरायो अनि छुटियो माधवसँग ।
केही महिनापछि फेरि उनीहरूको भेट भयो । त्यसबेला दिलमानको अवस्था साह्रै दयनीय भइसकेको थियो । उसको जीर्ण शरीरमा हाँसो र खुशीको रेखा रतिभर थिएन । दुब्लाएर हाड र छालामात्र देखिन्थ्यो उसको शरीर । त्यसबेला त ऊ पागलझैँ बोल्थ्यो । आफूलाई अदपमा राख्नै नसक्ने भइसकेको थियो ।
माधवले प्रश्न गर्यो,- "बहिनीको पता लाग्यो त ?"
दिलमान बोल्दै गयो,- "पत्ता लाग्यो । उनी पोइला गइसकी । अब उनी मेरी रहिनन् । उनको वियोगको तड्पाईमा मैले के गरिनँ होला । सबथोक गरेँ । म धेरै धार्मिक कृयाकलापतिर लागेँ । म मन्दिर, चर्च, मस्जिदमा गएर मनको पीरलाई भुल्ने प्रयास गरेँ । म कहिले गडएन्जल, कहिले साई बाबा, कहिले आत्मनन्दकहाँ गएर प्रार्थना, प्रवचन सुनेर ऊसँगको वियोगको पीर, व्यथा भुल्ने प्रयास गरेँ । यति गर्दा पनि उसलनई भुल्न सकिनँ । त्यसले गर्दा म गीत संगीततिर लागेँ । यो मेरो सानैदेखिको सोख र रुचिको विषय हो । म अहिले दिनेश दाइ (प्रख्यात संगीतकार दिनेश सुब्बा) सँग संगीत सिक्दै छु । यस परिवेशले निर्दयीको सम्झना र मनको तड्पाई भुल्न सजिलो भएको छ । मलाई बाँच्न केही सजिलो भएको छ । अनि दाइ ! अब त मेरो कथा लेखिदिनु हुन्छ होला नि, होइन ?"
माधवले मन नलाग्दै भन्यो,- "लेख्ने कोसिस गरौंला नि ।" त्यसपछि उनीहरू छुटेका थिए ।
हाम्रो नेपाली समाजमा घट्ने यस्तो घटना सामान्य भइसकेको छ, जसले हाम्रो अन्तरमनलाई छुनै सक्दैन । नेपाली समाज दिनानुदिन अधोगतितिर झरिरहेछ, जसले गर्दा कुनै शोषित पीडित तथा अन्यायको कथाले हामी गम्भीर हुनै सक्दैनौं । हामी हाम्रो समाजभित्रका विसंगति र कुरीतिहरूप्रति संवेदनशील हुनै सक्दैनौं, जसले ती विसंगति र कुरीतिहरूले हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको बस्यै छ । कतै कसैले यस्ता विषय र घटनालाई कथामा रुपान्तरित गरिहाले पनि पाठकहरूको अनिकाल खड्किँदो छ । अभाव छ । जसले गर्दा हाम्रा सर्जकहरू निरुत्साहित र निराश देखिन्छन् । यहाँ दिलमान साह्रै विक्षिप्त र दुःखित छ । ऊ एउटा पागलप्रेमी भएको छ । उसले जीवनभरि दुःखैदुःखमात्र भोग्दै आएको छ । अझ पनि त्यहीं दुःखले सताइरहेको छ, उसलाई । त्यसैले ऊ एउटा कलाकार (गायक, संगीतकार) बन्न संगीत सिक्दैछ । माधवले पनि जीवनमा यस्तै दुःख, पीर, व्यथा भोग्दै आएको छ । त्यही दुःखाइ र भोगाइलाई ऊ आफ्नो सिर्जनाहरूमा पोख्दै आइरहेको छ । अर्थात लेखक भएको छ । उनीहरूको भोगाइ दुखाइ समग्रमा समान छन् । र पनि माधवजस्तो सिकारु लेखकलाई कति पनि संवेदनशील र विचलित बनाएन, ऊ कति पनि गम्भीर भएन । 'लेख्ने प्रयास गरौंला' भनेर टारिदियो ।
तर यो घटनाले माधवलाई सोच्न बाध्य बनायो । ऊ आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्छ,- "मप्रति आज एउटा विशाल प्रश्न तेर्सिरहेको छ -के मैले आफूजस्तै शोषित पीडित र आफ्नै वर्गको हृदय-विदारक घटनालाई कथामा अनुवाद नगरुँ त ?" माधव आफैँ अनुत्तरित हुन्छ । उत्तरहीन । समाप्त ।